कोठामा ठाउँ बचत गर्न डेस्क डबलहरू सजाउनुहोस्
डेस्क तिनीहरू धेरै घरमा अपरिहार्य छन्। घरबाट काम गर्ने व्यक्तिको स increases्ख्या बढ्दो र अधिक हामी कम्प्युटर प्रयोग गरेर घरबाट प्रशासनिक प्रक्रियाहरू गर्दछौं। थप रूपमा, यो परीक्षाको तयारी गरिरहेका सबैलाई आफ्नो अभ्यास सामग्री व्यवस्थित गर्न आफ्नै सतह राख्नको लागि धेरै व्यावहारिक छ।
यद्यपि हामीसँग जहिले पनि यो स्थापना गर्न हामीसँग आफ्नै ठाउँ हुँदैन। त्यस्ता अवसरहरूमा बेडरूम वा बैठक कोठाबाट डेस्क पत्ता लगाउन "चोरी" गर्नु सामान्य कुरा हो। कार्य सँधै सजिलो हुँदैन; जब ठाउँ तंग हुन्छ यो विशेष गरी तपाईंको कौशललाई तिखार्न महत्त्वपूर्ण छ र वैकल्पिक समाधानहरूको लागि जस्तै फोल्ड डेस्क।
को तह र तह डेस्कहरू हाम्रो घरमा उपलब्ध स्थान सीमित हुँदा तिनीहरू उत्तम विकल्प हुन्छन्। तिनीहरू पनि ती सबैका लागि ठूलो समाधान हो जुन विश्वास गर्छन् कि स्थायी रूपमा कुनै फर्नीचरको एक टुक्रालाई नियमित रूपमा प्रयोग गरिंदैन भन्ने ठाउँमा ठाउँ दिन यो व्यावहारिक छैन। के तपाईं यी कुनै पनि केसको साथ पहिचान भएको महसुस गर्नुहुन्छ?
यस समस्यालाई समाधान गर्न बजारमा विभिन्न समाधानहरू छन्: साधारण तह तालिकाहरू, भित्ता डेस्क फोल्डिंग र अन्य विकल्पहरूमा समाहित विकल्पहरू, जस्तै वार्डरोब्स वा शेल्फहरू। उपलब्ध ठाउँ र हामी प्रत्येकको आवश्यकताहरू एक वा अर्को निर्णय गर्नको लागि प्रमुख कारक बन्नेछ। हामी तिनीहरूलाई छुट्टै विश्लेषण गर्दछौं!
1 तह तालिकाहरू
2 वाल डेस्क
3 एकीकृत फोल्डिंग डेस्क
तह तालिकाहरू हुन् सरल विकल्प आज हामी कति बदल्छौं तिनीहरूले तपाईंलाई ठाउँ बचत गर्न को लागी अनुमति दिन्छ वा, अर्को शब्दमा, अनावश्यक ठाउँ लिदैन जब तपाईं तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुन्न। भित्तामा जोडिएकाहरू, ती व्यक्तिहरूका लागि सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प हो जसले यसलाई दैनिक प्रयोग गर्दैनन् र धेरै अफिस आपूर्ति आपूर्ति गर्दैनन्।
यो पनि एक सरल र सस्तो प्रस्ताव हो। तपाई आफैले गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईंलाई केवल बोर्ड, दुई फोल्डिंग कोष्ठकहरू, केहि प्लगहरू, केहि स्क्रूहरू र ड्रिल आवश्यक छ। तपाईं यसमा एक पछि अर्को सरल चरण देख्न सक्नुहुन्छ डेभिड जेरार्ड भिडियो। तपाईं यसलाई अवस्थित सजावटमा उपयुक्त सामग्री र रंगहरू प्रयोग गरेर अनुकूलन गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं यस प्रकारको डेस्क भान्छामा राख्न सक्नुहुनेछ, ताकि टेबलले तपाईंलाई बिहानको खाजामा पनि पुर्‍याउँछ। अतिथि कोठा अर्को ठूलो ठाउँ हो जुन हामी यस प्रकारको टेबुलसँग डबल प्रकार्य दिन सक्छौं। थप रूपमा, तह ट्याबहरू बच्चाहरूको सुत्ने कोठामा धेरै व्यावहारिक छन् तिनीहरू अझै सानो छन्, ताकि तिनीहरूले आगोको स्थान गुमाउने छैन। यसको सुविधाहरूको कारणले गर्दा, तपाईं यसलाई हलवेमा स्थापना पनि गर्न सक्नुहुनेछ।
भित्ता डेस्कहरू पूर्ण छन्। अघिल्लो वैकल्पिकले प्रस्तुत गरेको भण्डारण अभावको लागि उनीहरू तयार हुन्छन्। कसरी? निगमित शेल्फ र सानो दराज यसको डिजाइनमा, ताकि हामी कागजातहरू र स्टेशनरीहरू व्यवस्थित गर्न सक्दछौं। यिनीहरू जारी राख्दछन्, हाम्रो स्थान बचाउन; जमीन खाली गर्न अनुमति दिदै।
बजारमा डिजाइनका बिभिन्न विविधताहरूले यो विकल्पलाई पनि सबैभन्दा आकर्षक बनाउँदछ। तपाईं भित्ता डेस्कहरू विभिन्न सामग्री, समाप्त र रंगहरूमा पाउनुहुनेछ। ती प्राकृतिक काठबाट बनेका सबै भन्दा लोकप्रिय र यी मध्येका हुन् स्कान्डिनेभियाई शैली। यदि तपाईं ट्रेंडी डेस्क खोज्दै हुनुहुन्छ भने, हल्का काठबाट बनेको एउटा छनौट गर्नुहोस् जुन हामी तपाईंलाई देखाउँछौं जस्तो न्यूनतम लाइनहरू सहित।
काठको रंग र डेस्कको रेखामा निर्भर गर्दै, हामी अधिक वा कम शैली प्राप्त गर्नेछौं समकालीन वा देहात। त्यहाँ बजारमा अन्य अधिक आधुनिक विकल्पहरू पनि छन्, जुन कृत्रिम सामग्री र एक चमकदार फिनिशको साथ सिर्जना गरिएको हो, आधुनिक घरहरू र बच्चाहरूको शयनकक्षहरू सजावटको लागि आदर्श हो।
एकीकृत फोल्डिंग डेस्क
तेस्रो वैकल्पिकले डेस्कलाई अर्को फर्नीचरको टुक्रामा एकीकृत गर्न प्रस्ताव गर्दछ। सुत्ने कोठामा हामी यसलाई वार्डरोबमा एकीकृत गर्न सक्दछौं, त्यसैले यसलाई राख्नको लागि अतिरिक्त ठाउँ प्रयोग नगर्दा। डेस्कले कपालबाट हामीलाई उपयोगी ठाँउ चोरी गर्न सक्दछ र जब हामी यसलाई प्रयोग गर्दैनौं यो ध्यान नलगाइन्छ। हामी यसरी प्राप्त गर्नेछौं दृश्य आवाज कम छ त्यो कोठामा, जसले क्रमको ठूलो भावना सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ।
हामी डेस्कटप एकीकृत गर्न सक्छौं शेल्फमा यो राम्रो विकल्प हो यदि हामी बैठक कोठा वा बहुउद्देश्यीय कोठाको सोच्दछौं जहाँ यस भण्डारण प्रणाली सँधै उपयोगी छ। थप रूपमा, हामीसँग कागजात फोल्डरहरू भण्डारण गर्न पर्याप्त कोठा हुनेछ यदि हामी तिनीहरूसँग कार्य गर्दछौं भने।
हामी आज तपाईलाई देखाउने हरेक विकल्पहरु लाई यसको समाधान गर्न सकिन्छ काम वा अध्ययन क्षेत्र कोठाबाट उपयोगी स्थान चोरी नगरी। सब भन्दा उपयुक्त छनौट गर्न हामीले हामीले आफ्नो आवश्यकतालाई शान्तपूर्वक विश्लेषण गर्नुपर्नेछ र आफैलाई केहि प्रश्नहरू सोध्नु पर्छ: के हामी दिनहुँ डेस्क प्रयोग गर्ने छौं? के हामी काम गर्ने क्रममा धेरै कागजहरू सार्छौं? कुन कोठामा यो ठाउँ राख्नको लागि उपयुक्त ठाउँ छ? ? हामीसँग यसको लागि छ? ...
यी प्रश्नहरूको उत्तर दिँदा हामी अझ सजग हुनेछौं जुन लामो समयसम्म हाम्रो लागि अझ बढी व्यावहारिक हुनेछ। एकचोटि सबैभन्दा उपयुक्त प्रस्ताव छनौट गरिसकेपछि यो समय फरक क्याटलगलाई हेर्ने र भित्री विकल्पहरूमा परिवर्तन हुने समय हुनेछ हाम्रो बजेट ध्यानमा राख्नुहोस् कि एकीकृत विकल्पहरूले तपाईंको बजेटमा थप गर्दछ।
के तपाईंको लागि तह डेस्क व्यावहारिक छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » फर्नीचर » फोल्डिंग डेस्कले तपाईंलाई ठाउँ बचत गर्दछ
कृपया प्रत्येक डेस्कमा सन्दर्भ राख्नुहोस्, अन्यथा पोष्ट धेरै प्रयोग भएको छैन
स्टेनलेस स्टील, सल्लाह र विचारहरू कसरी सफा गर्ने